Carbon 1 MK II: Ekwentị mbụ wuru na eriri carbon nwere ụbọchị na ọnụahịa na Spain | Gam akporosis
Carbon Mobile ụlọ ọrụ enyela nkọwa niile nke ihe ga-abụ ekwentị izizi nke eriri carbon, ihe eji eme ka ọ ghara inye ya nnukwu nguzogide. Carbon 1 MKII Ọ bụ ihe atụ emere maka ndị ahịa ahụ na-achọ ngwaọrụ na-abụghị nke a hụrụ na mbụ, yana ezigbo ngwaike.
Nlereanya nke onye na-emepụta German na-abanye n'ụzọ zuru oke n'etiti etiti, ụfọdụ obere nkọwa ga-eme ka ọ dị n'okpuru ndị ọzọ mara ụdị. Gba nzọ na mgbawa MediaTek, batrị ahụ nwere ike ịdị mkpụmkpụ, yana igwefoto ya abụọ, otu azụ na otu ihu.
1 Carbon 1 MK II, ihe niile gbasara ama ọhụụ
2 Batrị mara oke mma
Carbon 1 MK II, ihe niile gbasara ama ọhụụ
Carbon 1 MK II ahọrọla ihuenyo AMOLED nke anụ ọhịa isii Site na mkpebi HD zuru oke, usoro nhazi ahụ bụ 18: 9 wee rute na Gorilla Glass 7 Victus chebere ya. Enwere ike ịkele ma etiti elu na nke ala n'ụzọ dị ịrịba ama, nke nwere 18% nke akụkụ ihu.
Nhọrọ a họọrọ bụ Helio G90, MediaTek processor nke ga-agbada, mana ọ gaghị enwe njikọ 5G, nke agbakwunyela Mali-G76 MP4 graphics chip. Ncheta RAM na-aga 8 GB, zuru oke maka oge dị ugbu a, ebe nchekwa bụ 256 GB nke ụdị UFS 2.1.
Carbon 1 MK II na-ekwe nkwa nnukwu mma site na naanị sensọ abụọ ya, nke kachasị bụ megapixels 20 nwere ọgụgụ isi na ọtụtụ usoro e wuru iji wee rite uru na ya. Igwefoto n'ihu bụ ihe mmetụta 16 megapixel, dị mma maka ịse foto n'ụzọ doro anya ọbụlagodi n'ọnọdụ ọkụ dị ala.
Batrị mara oke mma
Ekwentị na-abịa na batrị 3.000 mAh, maka oge ugbu a ọ ga-ekwe omume na ọ dị ụkọ, ọ na-anọgide na-ahụ arụmọrụ kwa ụbọchị na iji ya eme ihe. Ihe arụmọrụ nke CPU ga-enyere gị aka ịchekwa ndụ batrị n'oge niile, nke mere na ọ bụ otu n'ime isi etiti dị mma.
Carbon 1 MK II ji ọsọ ọsọ abịa, mana ha akọwaghị etu o si eme ya, ọ bụ ihe dị mkpa, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ na obere oge. Nnwere onwe dabere n'ọnọdụ ọ bụla na ojiji a na-enye ya kwa ụbọchị, ma ọ bụ jiri ngwa ndị bụ isi ma ọ bụ ọbụna na egwuregwu.
Bịarute Helio G90 enweghị modem 5GỌ ga-enye njikọ 4G / LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC na ọ na-anabata kaadị SIM abụọ, agbanyeghị na ọ na-enyefe oghere MicroSD. Ihe mkpisi aka na-agụ akwụkwọ bụ mpụta, enwere ike ịhazi ya mgbe ewepụrụ ya na igbe ahụ ọ dịkwa mfe ịnweta.
Sistemụ arụmọrụ ahọrọ maka Carbon 1 MK II bụ gam akporo 11, ọ na-abịa na nsụgharị ya dị ọcha, ha niile na-enweghị akwa ndabara site n'aka ndị nrụpụta German. Ọ na-abịa na ọtụtụ ngwa arụnyere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na mgbakwunye na ọtụtụ atụmatụ nke iri na otu nke gam akporo ga-ewetara gị.
AKWỤKWỌ 1 MK II
IKIRU 6.0-inch AMOLED nwere mkpebi HD zuru ezu (2.400 x 1.080 pikselụ) / Nhazi: 18: 9 / Gorilla Glass 7 Victus
Nhazi MediaTek G90
Kaadị grafik Mali-G76 MP4
Nchekwa n'ime 256 GB nke UFS 2.1
Gbanwee CAMERA 20 MP isi ihe mmetụta
OS gam akporo 11
Njikọ 4G / Wi-Fi 4 / Bluetooth 5.0 / GPS / NFC
NDỊ ọzọ Akụkụ mkpisiaka agụ
Mbibi na ibu ibu 153.5 x 74 x 6.5 mm / 125 gram
Emeputa Carbon Mobile site na ebe nrụọrụ weebụ ya na-akwado na ekwentị Ọ ga-adị na ngwụsị ọnwa Machị maka ọnụ ahịa nke euro 799. Ọ ga-abata na otu nhọrọ agba, na-akọwapụta eriri carbon na agba ojii ma kwe nkwa iguzogide uzuzu, na-ebelata ibu n'ụzọ pụrụ iche, ebe ọ bụ na ụdị Carbon 1 MK II nwere ibu nke naanị gram 125.
Ngwaọrụ ọhụrụ a ga - eresị na webụsaịtị ndị nrụpụta yana saịtị ndị ọzọ pụrụ iche dịka Amazon, MediaMarkt, Otto, Galaxus, Conrad, Digitech na saịtị ndị ọzọ karịrị isii.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Carbon 1 MK II: Ekwentị mbụ wuru na eriri carbon enweela ụbọchị na ọnụahịa na Spain
Machị 23 ga-abụ ụbọchị ntọhapụ maka OnePlus 9 na OnePlus Watch